Cusbooneysiinta Calaamadaha Muuqaalka Scream Tv Cusub
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Cusbooneysiinta Calaamadaha Muuqaalka Scream Tv Cusub
Nooca TV-ga ah ee Qaylada ayaa ugu dambeyn ridaya oo tooganaya duuliyahooda. TVLine wuxuu hayaa sharraxaadda astaamaha loo adeegsan doono tuurista qoraalka. Ka dib oo ay la socdaan filimada, taxanaha TV-yada ee 'Scream TV' waxay umuuqdaan kuwa jilaya astaamo u badan dhalinyaro.
Harper Duval: Qurux 16 jir ah "oo in yar soo jiitamaysa isla markaana caqli badan oo aan noqon karin balanbaalis bulsheed" laakiin si kastaba ha noqotee waxaa ka careysiiyay dadka caanka ah inay noqdaan mid iyaga u gaar ah. "Waxay dareemeysaa dambi inay ka leexatay saaxibkeedii hore Audrey," laakiin ugu yaraan waxay leedahay xiriir 'Gilmore Gabdhaha' oo ay la leedahay hooyadeed Maggie si ay u fayoobaan.
Audrey Jesen: BFF-da hore ee Haper waxaa lagu sifeeyaa inay tahay "gabadha laba-xiisaha leh ee wadaadka Lutheran-ka ah" oo "xarig ka sii qurux badan". Tani "Artsy loner" wuxuu ku riyoodaa inuu noqdo filim sameeye wuxuuna xiriir dhow la leeyahay hanad teknolojiya Noah.
Nuux Foster: Qofka ugu dhow ee Audrey aaminay waa "hal abuur, xariif iyo farsamo yaqaan ku filan inuu noqdo Steve Jobs ee soo socda." Nasiib wanaag isaga, wuxuu leeyahay dareen aad u qosol badan ("a la John Cusack oo ah ra'iisul wasaarihiisii ​​dhallinta yaraa") oo ka caawiya inuu dhex maro hoolalka dugsigiisa sare. Waxa intaa dheer, Nuux wuxuu leeyahay "aqoon xeeldheer oo buugaag ah, filimaan, TV, barnaamijyo, iwm."
Margaret "Maggie" Duval: Hooyada Harper, horaanteeda ilaa badhtamihii 40-naadkii, waa baare caafimaad ee magaalada, "waa geesi saynis ah oo koray oo quruxdeeda hoos u dhigaya." Maggie waqti badan ayey ku bixisaa isku daygeeda si ay u kasbato xaqiiqda ah in aabihii Harper uu ka tagey. Oh, oo iyadu waxay qarineysaa “qarsoodi mugdi ah oo sooyaalkeedii hore.”
Waxaa qoray Jill Blotevogel (Ravenswood, Jasiiradda Harper, Eureka), Duuliyuhu wuxuu ka bilaabmaa fiidiyowga YouTube-ka oo faafaya, oo ugu dhakhsaha badan u horseedaya dhibaatooyin da'yarka Audrey una muuqda inuu “Waxay horseed u tahay dil oo daaqad u furaya dhibaatadii soo martay magaalada [iyada].”
Sideed u aragtaa Qaylada oo loo beddelay show TV? Noo soo sheeg faallooyinka.
Dhammaantiin waxaad ka qaylinaysaan taageerayaasha SUPER. Fiiri aruurintaan cajiibka ah:
Dhammaan afarta filim ee 'SCREAM' waxay ku jiraan daabacaadda gaarka ah ee uruuriyaha, oo leh 'SCREAM 2's Edition Collector's Edition' oo keliya oo lagu heli karo xirmadan sanduuqa. Mashiinka gaarka ah wuxuu ka kooban yahay dukumiinti ka dambeeya muuqaalka, tijaabooyinka shaashadda, ka-soo-baxyada, iyo qolka Goynta Qaaska ah ee u oggolaanaya daawadayaasha inay wax ka beddelaan muuqaalka guriga. Waxyaabaha DVD-ROM-ka ka kooban waxaa ka mid ah shaashad-sameeye, ciyaar yar, shaashad iyo liistada liiska.
Halkan guji si aad u iibsato!
Telefishanka naxdinta lehMTVTaxane Qaylo
Fiidiyow qosol leh ayaa muujinaya waxa aad jeclaan lahayd inuu ku dhaco 'The Walking Dead'!
10 Sababaha Loo Daawado Holliston: Xilligii Labaad Oo Dhameystiran